झापाको खिचडी काङग्रेस जस्तै पूर्व फलानो | परिसंवाद
झापाको खिचडी काङग्रेस जस्तै पूर्व फलानो
गफाष्टक	 बिहिबार, पुस २४, २०७६ मा प्रकाशित
नेपालको पूर्वी जिल्ला झापामा नेपाली काँग्रेसले सफलतापूर्वक भव्य समारोह बीच मेलमिलाप दिवस सम्पन्न ग¥यो । अघिल्लो दिन खिचडी पर्व थियो, भोलिपल्ट मेलमिलाप । झापामा कन्दनी कसेर हाम्रो काँग्रेसको जिल्ला नेताले अंकमाल गरे । हाम्रो भिरघरे पनि हान्निएर गा’को थियो झोली तोङमा बोकेर मेलमिलाप गर्न । आज ठयाक्क मेरै भेडी गोठमा आई पुगेछ ।
‘अनि हौ भिरघरे झापाका काँग्रेसले त मेलमिलाप ठोके अरे त । के अब अदुवा खोलाको पानी सफा हुने भएछ ?’ खस्, खस् लागेर मैले सोधें ।
‘हत काका पनि जहिल्यै नराम्रो कुरा गर्छौ । अदुवाको होइन काका हाम्रो काँग्रेस त माई खोलाको सफा पानि हो । जहिल्यै कन्चन । केन्द्रमा हेर्नु त शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइको मेल मिलाप’ अघिल्लो दिन विरवलको खिचडी खाइयो भोलिपल्टदेखि ड्याम्की ड्याम मेलमिलाप । विपीको बिचारमा टेकेर काँग्रेस जुरुक्कै उठ्यो काका अब ।’
भिरघरेको कुरा सुन्दा मेरो मन पनि गदगद भयो र फेरि सोधें – अनि विश्व प्रकाश र कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि खिचिडी खा’र अंगालो मारे ?
‘हाम्रो काँग्रेसमा ठूला नेताले अंगालो मार्नु पर्दैन काका ! माथि त नेताहरु व्रजलिप भ’र मिलेका छन् ।’
भिरघरे बोल्दै थ्यो कताबाट मेरी झुम्री टुप्लुक्क आइपुगी र भनी हाली ‘के अरे भिरघरे दुनियाले देखेको कुरा लुकाउन खोजेर ? तिम्रा काँग्रेस काठमाडौंमा के गर्दैछन् भन्ने कुरा रेडियोले बोल्दै थियो । जोडले नखोके हुन्छ । पूर्वको झापामा पुग्नै पर्दैन । हाम्रो डोल्पामा पनि काँग्रेस खिचडी पकार बस्या छ ।’
‘त्यसो होइन झुम्री काकी ! प्रजातान्त्रिक पार्टीमा फुक्काफाल भएर आफ्नो विचार, समुह, गुट, पक्ष र नेता रोज्न पाइन्छ । हामीले देउवा दाइ र रामचन्द्र दाइलाई नेता मानेका छौं ।’
‘पार्टीको नीति, सिद्धान्त, पद्धति नमान्ने नेता मान्ने भ’र त यस्तो भाको’ भनेर झुम्री गई पत्कर खोज्न । त्यसपछि मन खोलेर भिरघरे बोल्न थाल्यो ।
नेकपा जस्तो होइन हाम्रो काँग्रेस । नेकपा एमाले र माउबादी मिलेर बनेको अरे । खै मिलेको ? पूर्व माउवादी हाम्रो पार्टीमा विलए भएको हो । सूर्य चिन्ह र जबज मानेर आएका हुन भन्दै हिड्छन् एमाले हरु । मन मिलेन, भावना मिलेन, पद मिलेन, विचार मिलेन भनौं भने माउवादीको ‘लुटी ल्यायो भुटी खायो’ बिचार उनारु सँगै छ । ओलीले ओत नदेको भए चुनापमा, शक्ति, गिरिराज, वर्षमान, जनार्दन र प्रभु साहा बाहेक अरु चिलिमच्वाँट हुन्थे । प्रचन्न बाठा रान – एकता गरेर केही सिट बढाए । हाम्रो काँग्रेस त्यस्तो होइन उखेलेर फ्याँके पनि बनमारा झार जतो आफैं उम्रिन्छ र फैलिन्छ । पुष १६ गते झापमा पाकेको काँग्रेसको खिचडी पुष २० गते काठमाण्डौमा शेरबहादुर र रामचन्द्रले पस्किदै थिए । नेकपाको जस्तो होइन हाम्रो सिद्धान्त नै मेल मिलाप हो ।
भिरघरेलाई मुख भरीको जवाफ दिन मन थियो तर दिइन । यसको कारण के भने यहाँ उपल्लो डोल्पाको भेडी गोठमा बसेर म बोलौंला उता डडेल्ुधरा, तनहु, काठमडौं र झापामा काँग्रेसले पकाई राखेको वीरबलको खिचडी माथि चट्याङ पर्ला ! बरु यो जाडोमा शेर दाइ र प्रचन्न बोले जस्तो सेन्तेरेम चुस्क्याउँदै कुख्राको फिला दार्न पाए हुन्थ्यो ।
त्यतिखेरै पत्कर ले’र झुम्री टुप्लुक्क आइ पुगी । मेरी झुम्रीको छेउमा म र आर्जु मेडमको छेउमा देउवा दाइ उस्तै हो । म परें रोल्पाको भेडी गोठालो देउवा दाइ पर्नु भयो डलेल्धुराको काँग्रेस गोठालो । दाइ र ममा थोरै भिन्नता छ । दाइको काँग्रेस सकिदै, खिइँदै, मकिदै गयो मेरो भेडाहरु बढ्दै, फेलिदै र बलियो हुदै गयो । शेर दाइ र मममा चर्को भिन्नता भनेको दाइ भाग्यमा विश्वास गर्नु हुन्छ । भाग्यकै कारणले चार पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । म कर्ममा विश्वास गर्छु अहिलेसम्म भेडी गोठालो छु । दाइले भन्दा बढी कर्म गर्ने काँग्रेसमा धेरै छन् तर, दाइको भाग्यले ती कर्मवीरहर्लाई एकै गाँस बनाउँछ ।
आ………! जे सुकै होस् है ! बरु झापाका काँग्रेसहर्ले पकाएको मेलमिलापको बीरबले खिचडी फत्फत् भर फत्किएर पाकोस् । मेरो शुभकामना ।
ए झुम्री अस्ति घरबाट ल्याएको एक कठुवा त बाँकी नै छ त हौ ! उहाँ काठमाण्डौमा शेरदाइ र प्रचन्न ब्रो बसेर दिन थाली सके होला । आउ हामी पनि बसेर एक एक बाटुको दिऊँ ।
आज चैं झुम्रीले सर्लक्क कठुवा झिकी, नत्र आरजुरुप धारण गरेर शेर दाइलाई जस्तोइ दुर्बचनले हिकाई हाल्थी ।
लौ त यही खुशीमा सप्पैलाई
जै नेपाल है ।
अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण गर्नु अर्को अपराध हो
विद्युत उपभोगकर्ता र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न अध्ययन समिति